5-jeer ayuu iska diiday inuu matalo xulka Dalkiisa, Maxaase u galay Riyad Mahrez…(QISO GAABAN oo ku aadan Laacibkii xalay lugtiisa ku reebay Man United) – Gool FM
5-jeer ayuu iska diiday inuu matalo xulka Dalkiisa, Maxaase u galay Riyad Mahrez…(QISO GAABAN oo ku aadan Laacibkii xalay lugtiisa ku reebay Man United)
Byare March 14, 2018
(Europe) 14 Maarso 2018. Taageerayaasha Manchester United ayaa ku qarwaya Wissam Ben Yedder kaddib markii uu xalay ka soo reebay tartanka Champions League iyagoo waliba ku ciyaaraya gegadooda Old Trafford.
27-jirka weerar kaga ciyaara Sevilla ayaa labo gool ka muday Red Devils kulankii ay 2-1 uga adkaadeen.
Haddba wax yar ka ogoow qisada wiilkii xalay sida wayn loo bartay:
Wissam Ben Yedder ayaa saaxiib la ahaa Riyad Mahrez tan iyo yaraantoodii.
Wiilka Soogalootiga ah ee reer Tunisia ayaa shan jeer iska diiday inuu matalo xulka qaranka dalkiisa maadaama uu doonayo Xulka Faransiiska.
Markii ugu dambeysay uu diido Tunisia ayaa ahayd Bishii Oktoobar ee 2017, laakiin ugu dambeyn dalkiisa ayaa u soo baxay koobka adduunka ee lagu qabanayo Ruushka iyagoona ku group ah England.
Ben Yedder oo ka hadlaya sababtii uu u diiday inuu matalo dalkiisa ee Tunisia ayaa mar uu u waramayay El Pais yiri:
“Xushmad badan ayaan u hayaa Tunisia, Laakiin Faransiiska waa wax kale, waa xulka aan doonayo inaan u ciyaaro.
“Waqti xaadirkan tababare Didier Deschamps wuxuu dooranayaa laacibiin kale, laakiin dabcan waa riyo inaan xulka Faransiiska u ciyaaro koobka adduunka.
“Haddii aan sii wado gool dhalinta Sevilla iyo tartamo sida Champions League waxaa laga yaabaa inay riyada Rumowdo.”.
Wissam Ben Yedder wuxuu ku soo koray Nolol adag iyo meel Khatar leh:
Laacibka ayaa ku soo koray Sarcelles ee dalka Faransiiska halkaa oo ah meel adag oo ay ku badan yihiin Burcada iyo dambiyada, Balse Guul ayay u horseeday inuu ku soo koray noloshaasi adag maadaama ay ka go’neyd inuu is hor mariyo.
Inta uusan Ben Yedder noqon xirfadle Rasmi ah wuxuu ciyaari jiray Ciyaaraha Fustal ka:
Wuxuu u soo ciyaaray Garges Djibson, sidoo kale xulka Faransiiska ee 21 jirada ayuu ku soo matalay Fuustalka.
27-jirka ayaa sheegay in farsamada uu iminka ku qaraabanayo iyo sida loogu gooyo daafacyada iyo Goolhayaha uu ka soo bartay Fuustalka.
Maxaa ka dhexeeya isaga iyo laacibka Leicester City Riyad Mahrez?:
Riyad Mahrez iyo Wissam Ben Yedder ayaa Saaxiibo ahaa tan iyo Yaraantoodii.
Xiddiga Sevilla ayaa sheegay inay wadooyinka ku wada ciyaari jireen.
“Waa wax wayn inaad dib u eegto markii aan xaafadaha dariska ku ciyaari jirnay, aan arki jinay Hooyo oo qeylineysa iyo sidoo kale sida aan ugu soo kornay inaan ciyaarno kubbada cagta tartamada u dhexeeya xaafadaha.
“Xaafado kale ayaan u aadi jirnay si aan iyaga ula soo ciyaarno, sidoo kale inaad aragto adigoo tartiib tartiib u hormaraya, dhammaan waa xusuus farxadeed.”.
Ma ogtahay in West Ham ay iska diiday Ben Yedder weliba Sabab Sahlan?:
Kooxda reer London ayaa aaminsaneyd inuu yahay mid aad u yar isla markaana uusan ka bixi karin ciyaaraha xooga ku dhisan ee Premier League.
Laakiin Wuxuu u caddeeyay inay qaldan yihiin maadaama uu min Labo gool ka dhaliyay Man United iyo Liverpool ee ah kooxaha ugu Tunka wayn Ingiriiska.
GOOGOOSKA: Barcelona vs Chelsea 3-0 (4-1) (Barca oo soo baxday)
HORDHAC: Arsenal vs AC Milan